Ongororo ichangobva kuitwa neWater Quality Association yakaratidza kuti makumi matatu kubva muzana evatengi vanoshandisa mvura yekugara vaive nehanya nemhando yemvura inoyerera kubva pamapombi avo. Izvi zvinogona kubatsira kutsanangura kuti sei vatengi veAmerica vakashandisa zvinopfuura mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora pamabhodhoro gore rapfuura, uye nei maw ...
UV LED KUSIMBISA TEKNOLOJI-UV-C LED Tekinoroji - Iyo Inotevera Revolution?
Ultraviolet (UV) disinfection tekinoroji anga ari mutambi wenyanzvi mukurapa kwemvura uye nemweya mukati memakumi maviri emakore apfuura, nekuda kwechimwe chikamu kugona kwayo kurapa pasina kushandisa makemikari anokuvadza. UV inomiririra wavelengths iyo inowira pakati peinoonekwa mwenje uye x-ray pane iyo electromagnet ...
Yepasi Pose Mvura Inonatsa Musika Kuongorora 2020
Kucheneswa kwemvura kunoreva maitiro ekuchenesa mvura umo makemikari asina hutano, makemikari uye zvisikwa zvisina kuchena, zvinosvibisa, uye zvimwe zvisvinu zvinobviswa mukati memvura. Chinangwa chikuru chekuchenesa uku kupa yakachena uye yakachengeteka mvura yekunwa kuvanhu ...